I-Pegatron ivumela intatheli ukuba zityelele isityalo sayo se-iPhone okokuqala | IPhone iindaba
I-Pegatron ivumela iintatheli ukuba zityelele isityalo sayo se-iPhone okokuqala
Kwimpelaveki edlulileyo, Bloomberg esidlangalaleni ulwazi olukhethekileyo oluze kuye luvela kwisityalo Pegatron isuka e-China apho inkampani idibanisa i-iPhone. Eyona mveliso iphambili ye-Apple ngale ndlela yiFoxconn, kodwa uTim Cook kunye nenkampani bagqibe, njengoko bahlala besenza ukuze bangaxhomekeki kwinkampani enye, ukusasaza iiodolo zabo, ke uPegatron ube yinxalenye yomxokelelwano wokubonelela nge-iPhone.
Kwinqaku lakhe, iBloomberg ichaza indlela iPegatron elawula ngayo umthwalo womsebenzi, iiyure ezilandelelweyo ngokusebenzisa iinkqubo ezizenzekelayo okanye ukulungisa imiba yomsebenzi efana nexesha elongezelelweyo. Nangona utyelelo kumaphepha-ndaba kumzi-mveliso lunokubonakala luqhelekileyo, kodwa kunjalo okokuqala yintoni ipegatron ngokusemthethweni ivumela iintatheli ukuba zingene kwimizi-mveliso yayo, indawo apho kusebenza khona abantu abangama-50.000 XNUMX. Eyona nto ibaluleke kakhulu, bavumela iifoto ukuba zithathwe ukubhala yonke into.
Umatshini wokushicilela ungena kwenye yefektri yePegatron
Abaqeshwa besi sityalo bajongwe kakhulu iikhamera ezinobuso obaziwayo kunye nezinye iintlobo zokuchonga ezibavumela ukuba bavule izixhobo ezithile. Ukongeza, kuya kufuneka bagqibe nakwizikhangeli zentsimbi ukujonga ukuba abathathi nto na abanokuyicoca kamva. NgokukaBloomberg, intengiso ibiza abasebenzi nge-9: 20 kwaye bonke bayasebenza kwaye badibanisa ii-iPhones kwimizuzu emithandathu kamva.
Ezinye zeenkqubo zokuchonga ezizenzekelayo zisetyenzisiwe kuthintela abasebenzi kwesi sityalo ekusebenzeni ixesha elininzi kwaye ke ngokuthobela imigaqo ye-Apple yonikezelo lwayo. Kwaye ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo kwafunyaniswa ukuba uninzi lwabasebenzi bePegatron basebenza ngaphezulu kweeyure ezingama-60 ngeveki.
Emva kokufunda ulwazi olungentla apha, ayimangalisi into yokuba ayingabo bonke abasebenzi abonwabileyo kulo mzi-mveliso. Udliwanondlebe no-Bloomberg bathi uninzi luthanda ukusebenza ixesha elongezelelekileyo kuba umvuzo uphantsi. Ingxaki kukuba imigaqo ithintela abasebenzi ekusebenzeni ixesha elongezelelekileyo kwaye iApple, njengayo nayiphi na inkampani, kufuneka ithobele imigaqo yelizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Pegatron ivumela iintatheli ukuba zityelele isityalo sayo se-iPhone okokuqala
IMacBook 12 entsha "iphakathi kwe-5% kunye ne-18% ngokukhawuleza
Abasindileyo-Abalahlekileyo eHonduras, umboniso wokwenyani kwi-iPhone yakho